बेहुला बेपत्ता भएपछि बेहुलीले जन्ती आएको केटासँग बिहे गरिन्
एजेन्सी, १२ जेठ । बेहुलो बेपत्ता भएपछि जन्ती आएको केटासँग बिहे गरिन् बेहुलीले छिमेकी मुलुक भारतमा एउटा अनौठो घटना भएको छ । बिहे समारोहबाटै बेहुला बेपत्ता भएपछि अप्ठेरोमा परेकी बेहुलीले जन्ती आएको एकजना युवकसँगै बिहे गरेकी छिन् ।
घटना भारतको उत्तरप्रदेशस्थित महाराजपुरमा भएको हो । समाचार अनुसार उक्त बिहे समारोहमा स्वयंवरको कार्यक्रम सम्पन्न भैसकेर बिहेको बाँकी अनुष्ठान सुरु गर्ने तयारी भैरहेको थियो । तर एक्कासी बेहुला चाहीँ बिहेस्थलबाट बेपत्ता भए ।
बेहुला र बेहुली दुबै तर्फका परिवारजनले बेपत्ता बेहुलाको खोजी गरे । तर फेला पार्न सकेनन् । बेहुला के कारणले त्यहाँबाट भाग्यो भन्ने थाहा भएन । तर उनी बिहे नगर्ने सोँचले त्यहाँबाट भागेको ठहर गरियो । बिहेको मण्डपबाटै बेहुला भागेपछि बेहुली विचलित भइन् । दुबैतर्फका परिवारहरु के गर्ने ? के नगर्ने ? भन्ने अवस्थामा पुगे ।
त्यसपछि त्यहाँ उपस्थित जन्ती तथा बेहुली पक्षकाले समेत जन्ती आएकामध्ये उपयुक्त युवकसँग ती बेहुलीको बिहे गरिदिने निधो गरे । त्यसपछि जन्ती आएकामध्ये बिहेका लागि इच्छुक तथा उपयुक्त युवकको खोजी गरियो अनि दुबैतर्फका अभिभावकले छलफल गरे अनि बिहे गराइयो ।
जन्ती आएको केटासँग छोरीको बिहे गराएसँगै बेहुलीका बुवाले भगौडा बेहुला र उसको परिवार विरुद्ध कारवाहीका लागि पुलिसमा मुद्दा हालेका छन् । भगौडा बेहुलाका बुवाले पनि आफ्नो छोरा खोजीपाउँ भनी पुलिसमा निवेदन दिएका छन् ।
राजको बचाउमा शिल्पाको बयान- उनले अश्लिल फिल्म बनाएका होइनन्
आफ्ना गुप्तचरलाई जो बाइडेनको निर्देशन- कोरोना कहाँबाट कसरी फैलियो ९० दिनभित्र पत्ता लगाउनू
संसद विघटनबारे भारतले भन्यो–यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो
राज कुन्द्राले प्राइभेट नम्बर लिक गरिदिएको पूनम पाण्डेको आरोप
एनआरएनएको १०औं ग्लोवल सम्मेलन कात्तिकमा, अनलाइनबाट मतदान
चर्चित र्‍यापर क्रिसमाथि याैन अपराधकाे आरोप, ११ कम्पनीले रद्द गरे सम्झाैता
लामो समय घरभित्रै थुनिनुपरेपछि अष्ट्रेलियामा लकडाउनप्रति असन्तुष्टि
भारतमा ‘कालो ढुसी’को संक्रमणबाट ४३ सयभन्दा धेरैको मृत्यु
भारतमा भुकम्पको झट्का
भारतमा अबको १२५ दिन क्रिटिकल हुने